मलेसिया, कतार, साउदी, युएईका देशमा एसएसपी दर्जाको 'प्रहरी सहचारी' राख्न प्रस्ताव ! - jagritikhabar.com
मलेसिया, कतार, साउदी, युएईका देशमा एसएसपी दर्जाको ‘प्रहरी सहचारी’ राख्न प्रस्ताव !
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिभिन्न ६ मुलुकमा प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) दर्जाको प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस सम्बन्धमा जानकारी गराउदै २०७८ असोजमा गृह मन्त्रालयलाई त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्नका लागी पत्राचार गरिएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) बसन्त कुँवरले बताए । त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुचना संयन्त्रको विकास गर्नका लागी सो प्रस्ताव गरिएको कुँवरले बताए ।
प्रवक्ता कुँवरका अनुसार प्रहरी हेडक्वार्टरले मलेशिया, कतार, साउदी अरब, चिन, बंगलादेश, संयुक्त अरब ईमिरेट्स र संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालयमा प्रहरी सहचारी खटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका दुई नेपाली बहराइन र साउदी अरबमा पक्राउ
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका दुई अभियुक्त विदेशमा पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को सहयोगमा एकजनालाई बहराइन र अर्कालाई साउदी अरबबाट पक्राउ गरेको हो ।
कास्कीका अशोक गुरुङ बहराइनबाट र उदयपुरका गोविन्द मगर साउदी अरबमा पक्राउ परेका हुन् । इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका दुवैजना वैदेशिक रोजगारीका क्रममा त्यहाँ पुगेका थिए । दुवैलाई नेपाल ल्याउन प्रहरीको इन्टरपोल शाखाले कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ ।
पोखरामा हत्या, बहराइनमा हतकडी
साढे १५ वर्षअघि पोखरामा भएको एक हत्याका आरोपी हुन्, अशोक गुरुङ । गत २९ मंसिरमा उनलाई बहराइनको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । गुरुङलाई नेपाल ल्याउन कूटनीतिक माध्यमबाट सुपुर्दगीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।
२९ वैशाख ०६३ मा उनले पोखराको सातमुहानेमा रोजन राईको हत्या गरेका थिए । आपसी विवादमा झगडा हुँदा टाउकोमा चिर्पटले हानेर राईको हत्या गरिएको थियो ।
त्यसयता फरार रहेका गुरुङ बहराइन पुगेको सूचना पाएपछि प्रहरीले उनलाई रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको थियो । इन्टरपोलबाट गत २७ मंसिरमा रेड नोटिस जारी भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि बहराइनमा उनी पक्राउ परेका हुन् ।
बहराइनले एक महिनाभित्र सुपुर्दगीका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट आउन नेपाललाई पत्राचार गरेको छ । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीले गुरुङविरुद्धको अभियोगबारे गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै बहराइनलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसका आधारमा त्यहाँको अदालतले सुपुर्दगी गर्न आदेश दिएपछि नेपाल ल्याइने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा उनलाई साउदीले निष्कासन गरी नेपाल पठाउनेछ ।
प्रेमिकाका आमा–बुबा हत्या गरेर साउदी गएका थिए मगर
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका गोविन्द मगरलाई इन्टरपोलकै सहयोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उदयपुरका मानबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमती हर्कमायाको हत्या अभियोग उनीमाथि छ ।
आफूसँग प्रेम–सम्बन्ध भएकी छोरीको अरूसँग विवाह गरिदिएको रिसमा उनले युवतीका आमा–बुबाको बीभत्स हत्या गरेका थिए । मगरले सुरुमा मानबहादुरमाथि आक्रमण गरेका थिए । हर्कमाया रोक्न आउँदा उनको समेत हत्या गरेका थिए ।
घटनापछि फरार मगरविरुद्ध गत वर्ष माघमा रेड नोटिस जारी भएको थियो । उनलाई लिन नेपाल प्रहरीको टोली साउदी अरब जान लागेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
६ देशमा प्रहरी सहचारी खटाउन प्रस्ताव
अन्तरदेशीय प्रकृतिका अपराधको सहज अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि ६ देशमा प्रहरी कन्सुलर राख्न नेपाल प्रहरीले पुनः प्रस्ताव गरेको छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरब, चीन, बंगलादेश र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा प्रहरी सहचारी खटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालयमा पनि सहचारी खटाउन प्रस्ताव गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दर्जाको सहचारी खटाउन प्रहरीको प्रस्ताव छ । प्रहरीले पटक–पटक यस्तो प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन । हाल भारतको नेपाली दूतावासमा मात्र नेपाल प्रहरीका सहचारी छन् ।
खासगरी, धेरै नेपालीको बसोवास रहेको देशमा सहचारी खटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ती देशसँग मानव तस्करी, हुन्डीलगायतका अपराधको अनुसन्धानमा पनि सहज हुने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहजीकरणका लागि स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालयमा सहचारी खटाउन प्रहरीले प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
अन्तरदेशीय प्रकृतिका अपराधको सहज अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, चीन, बंगलादेश र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा प्रहरी सहचारी खटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा गृहलाई पत्राचार